बर्सेनि ३ हजारको मिर्गौला फेल
इलाम । ‘तपाईंको सुगर धेरै हाइ छ, सचेत रहनुहोला,’ पिसाब परीक्षणपछि स्वास्थ्यकर्मीले सुझाइन्, ‘मिर्गौलामा पक्कै खराबी हुनसक्छ, डाक्टरलाई देखाइहाल्नुस् ।’ उनी पूर्जी बोकेर फटाफट निस्किए । इलाम अस्पतालमा सञ्चालित शिविरमा मिर्गौला जाँच्न पुगेका नारायणस्थानका...
रक्तचाप जचाउनु भयो ?
काठमाडौं । भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित खतराबाट जोगिन वा वास्तविकता थाहा पाउन के तपाईंले आफ्नो रक्तचाप जचाउनु भयो रु मुलुकमा गरिएको एउटा अध्ययनअनुसार करिब ४३ प्रतिशत नेपालीले जीवनमा एक पटक पनि आफ्नो रक्तचाप जचाउँदैनन्...
दुइटै छोरी समलिंगी हुँदा…
काठमाडौं । आफ्ना दुवै छोरी बढ्दै जाँदा स्वभाविकभन्दा भिन्न व्यवहार देखाउन थालेपछि सरु विष्टलाई निकै चिन्ता परेको थियो । त्यसमाथि समाजले यस्ता छन् तेरा छोरीहरु भनेर कुरा काट्न थालेपछि त किन जन्माएछु भन्नेसम्मको सोचमा...
‘मेडिकल कलेज र फार्मेसीहरु दर्तौ नभइ चलेका छन्’
काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले केही मेडिकल कलेज र फार्मेसीहरु दर्ता समेत नगरी चलाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारी नियम र माफदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज र फार्मेसीको...
एजेन्सी । रक्सी खाने मानिसहरू प्रायजसो ह्याङओभर (रक्सीको असर) को कुरा गर्छन् । राति खाएको रक्सीको ह्याङओभर बिहानसम्म गएको हुँदैंन । कतिपय अवस्थामा अलग–अलग प्रकारको रक्सी मिसाएर खाँदा मानिसले अझ बढी ह्याङओभर महसुस गर्छन्...
१०० रोचक स्वास्थ्य तथ्य
१. जब तपाईं आफ्नो प्रियलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईंको आँखाको नानी फैलन्छ र घृणा गर्ने व्यक्तिलाई हेर्दा आँखाको नानी खुम्चन्छ । २. जन्मदा मानिसको टाउको जम्मा उचाईको एक तिहाई हुन्छ । तर, जब मानिस वयस्क हुन्छ,...
किन गन्हाउँछ सास ?
झट्ट हेर्दा सामान्य देखिएपनि मुखको दुर्गन्धले धेरै मानिसलाई सताईरहेको हुन्छ । यहीकारण साथीभाईबीच मात्र नभई पति पत्नीबीच पनि दूरी उत्पन्न हुन सक्छन्, मानिसलाई लाजमर्नु बनाउछ मुखको दुर्गन्धले । मानिस जतिसुकै सुटेडबुटेड देखिएपनि मुख गन्हाउने...
यसरी बन्छ स्तन कसिलो
आकर्षक शरीरका आ-आफ्नै आधार होलान्। यहाँ यौन आकर्षणको सन्दर्भमा कस्तो शरीरलाई विशेष यौन आकर्षक मानिन्छ केही चर्चा गरौं। पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश अनि कसिलो मांसपेसी भएकी महिलालाई आकर्षक मानिन्छ।...